टाउको दुखाईमा रोइ के हो? | Martech Zone
टाउको दुखाईमा रोइ के हो?
मङ्गलबार, जुन 9, 2009 शनिबार, जून १,, २०१। Douglas Karr
सफ्टवेयर कम्पनीहरू र सफ्टवेयरलाई सेवा कम्पनीहरूले सोच्दछन् कि तिनीहरूले टेक्नोलोजी बिक्री गरिरहेका छन्। टेक्नोलोजी बेच्न सजिलो छ ... यसको आयाम छ, ठाउँ लिन्छ, निश्चित सुविधाहरू, सीमाहरू, क्षमताहरू ... र लागतहरू छन्। समस्या यो छ कि अधिकांश मानिसहरूले प्रविधि किन्न छैन।
एक ठूलो बिक्री संगठन पर्याप्त समय दिनुहोस् र तिनीहरूले कुनै पनि हेरफेर गर्न सक्छन् प्रस्तावको लागी अनुरोध एक कम्पनी को लागि एक जीत र लाभदायक रणनीति मा। म त्यस्तो कम्पनीको लागि काम गर्दछु जसले प्राथमिक प्रतियोगिता (हाम्रो सम्भावनाको विचारमा - मेरो होइन) खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। यदि हामीले महँगो सफ्टवेयर बेच्यौं जुन सित्तै सित्तै सफ्टवेयरको साथ प्रतिस्पर्धा गर्‍यो, हामीसँग +००+ ग्राहकहरू हुँदैनन्। हामी किन बढ्दै छौं भन्ने कारण हामी वास्तविक छैनौं बिक्री सफ्टवेयर - हामी परिणाम बेच्दै छौं।
हाम्रो सम्भावनाहरु लाई विश्वास छ कि हाम्रो ब्लगिंग प्लेटफर्म मा स्थानांतरण मा मूल्य छ कि यसको परिणाम हुनेछ कुनै टाउको दुखाई सडक तल कुनै टाउको दुखाई डाउनटाइममा, कुनै टाउको दुखाई मर्मतमा, कुनै टाउको दुखाई सुरक्षा मुद्दाहरूमा, कुनै टाउको दुखाई स्केलेबिलिटीमा, कुनै टाउको दुखाई प्रदर्शन मा, कुनै टाउको दुखाई प्रयोगकर्ताहरूलाई शिक्षित गर्न, कुनै टाउको दुखाई किनभने यो प्रयोग गर्न गाह्रो छ ... र सबै भन्दा धेरै कुनै टाउको दुखाई असफलता बाट
हुनसक्छ हाम्रो वास्तविक प्रतिस्पर्धा टायलोल हो!
केहि सम्भावनाले टाउको दुखाइको अवसरको स्वाद लिन्छ ... यो ठीक छ ... हामी उनीहरूको लागि यहाँ छैनौं। हामी बरु ग्राहकहरूसँग काम गर्ने छौं जसले परिणाममा ध्यान दिन्छन्। परिणाम द्वारा परिभाषित गरीएको उनीहरुहोइन us.
जब तपाईंको कम्पनी टेक्नोलोजीमा लगानी गर्दछ, यो हार्डवेयर र सफ्टवेयर होइन (माफ ईन्जिनियर्स!) कि उनीहरूले किन्दै छन् - कुनै कुरा कत्ति सुन्दर छैन। तपाईको कम्पनीले के वास्तवमा लगानी गरिरहेको छ उत्पादनको अगाडि र पछाडि मानिसहरू। तपाईंको कम्पनीले तिनीहरू भरोसा गरेको सेल्सम्यानमा लगानी गर्दैछ। तपाइँको कम्पनीले उद्यमीमा लगानी गर्दैछ जसले कम्पनी शुरू गर्‍यो जुन तपाइँलाई एक नेताको रूपमा थाहा छ। तपाईको कम्पनीले मानिसहरुमा लगानी गरिरहेको छ - मानिस जसले समस्या समाधान गर्यो जसले तपाईलाई टाउको दुखाइ दिन्छ।
सरकारी ग्राहकको लागि काम गर्ने एक ग्राहकले मलाई हाल भन्यो:
डग - मलाई मतलब छैन रय। मलाई तपाईंको अनुप्रयोगले हामीलाई कत्ति पैसा कमाउन सक्छ भन्ने बारे मतलब छैन। मलाई अपसेलको बारेमा मतलब छैन। मलाई टेक्नोलोजीको वास्ता छैन। किन म तपाईंको कम्पनीलाई भुक्तान गर्दछ किनकी तपाईं फोन वा ईमेलको उत्तर दिन त्यहाँ हुनुहुन्छ जब मसँग एउटा प्रश्न छ ... र तपाईंलाई उत्तरहरू थाहा छ। फोनको उत्तर दिनुहोस् र मलाई मद्दत गर्नुहोस् र हामी वरिपरि रहनेछौं। फोनलाई उत्तर दिन रोक्नुहोस् र मैले पाउन सक्ने कोही भेट्ने छु।
यही कारणले कि ग्राहक सेवा महान् प्रविधि स्टार्टअपको त्यस्तो महत्वपूर्ण घटक हो। मलाई मतलब छैन तपाईंको अनुप्रयोग कत्ति राम्रो छ… जब तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूलाई बताउन थाल्नुहुन्छ तपाईं के गर्नुहुन्छ सक्दैन उनीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्, उनीहरूले नविकरणमा हस्ताक्षर गर्ने आशा नगर्नुहोस् (एक अप्सलको सम्झना छैन!)। तपाईका ग्राहकहरु सफलता चाहान्छन् र तिनीहरु तपाईलाई विश्वास दिलाउँछन् कि तपाईलाई यो दिनुहोस्। तपाई सुन्नुहुन्छ र जवाफ दिनुहुन्छ। अझ राम्रो - तपाइँ आफ्नो ग्राहकहरूको सफलताको निर्माणको लागि सक्रियतासाथ अघि बढ्नुपर्दछ।
सफ्टवेयर भित्र एक सेवा उद्योगको रूपमा समेत, कम्पनीहरूले भेट्टाए कि तिनीहरू ग्राहक समर्थन पृष्ठ वा ज्ञान आधार ... वा नराम्रो, ग्राहक फोरम पछाडि लुक्न सक्दैनन्। सास ग्राहकहरूले कसरी तिनीहरू सफल हुनको लागि लगानी गरेको समाधान पूर्ण लाभ लिन कसरी बुझ्न आवश्यक छ। यसको लागि सक्षम, अनुभवी कर्मचारीहरू आवश्यक छन् जसले बुझ्छन् कि यसले के लिन्छ।
यी नेताहरूले कम्तिमा प्रतिरोधको मार्ग बुझ्छन्, उनीहरू कसरी ग्राहकहरू पढ्ने भनेर बुझ्दछन् कि उनीहरू वृद्धि वा ग्राहक प्रशंसापत्रको लागि उत्तम संभावनाहरू छन् कि… प्राय जसो उनीहरू बुझ्दछन् ग्राहकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कसरी प्रभाव पार्ने भनेर। यसको लागि हास्यास्पद छोटो अवलोकन गरिएको लक्ष्यहरू आवश्यक छैन, ग्राहकहरूको सफलतालाई वेवास्ता गर्ने प्रक्रियाहरू, वा खराब ... माइक्रोमेनेमेन्ट जब संसाधनहरू पहिले नै अभाव हुन्छ। यसको लागि कम्प्युटरको तर्फबाट ठूला निर्णयहरू लिने अनुमति दिदै, र ग्राहकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सेवा पुर्‍याउन सबै अवरोधहरू हटाउने (र लाभदायक) आवश्यक पर्दछ।
के तपाई आफ्नो ग्राहकहरुलाई सफलता प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ? वा तपाइँको कर्मचारीहरु मात्र उनीहरुलाई दिने हो बढी टाउको दुख्ने?
टैग: डिलिभ्राedgerankमोबाइल र ट्याब्लेट मार्केटिंगगैर नाफामुखी बेन्चमार्कprwebसामाजिक रिपोर्टिंग
$ २ 299 end खर्च गर्नुहुन्छ र याहूलाई तपाईंको साइट बुझाउनुहुन्छ?